Chief Accountant Great Foundation ( Plastic Manufacturing ) Co.,Ltd
Industrial Machinery / Automation Equipment , Manufacturing
Analysis & Reporting , General / Cost Accounting
အရောင်းဌာနမှ order များ နေ့စဉ်လက်ခံပြီး order များကို အချိန်မီ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရန် တာဝန်ယူကြီးကြပ်ခြင်း၊Production Plan များရေးဆွဲခြင်း နှင့် Plan အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော် ထုတ်လုပ်မှုကိုကြီးကြပ်ခြင်း။ထုတ်ကုန် များ အရည်အသွေးပြည့်မီစွာ ထွက်ရှိလာရန် တာဝန်ယူရခြင်း။သတ်မှတ်ထားသော ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း (Productivity and Cycle Time) ထက် မလျော့အောင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် စီမံကွပ်ကဲခြင်း။သတ်မှတ်ထားသော အပျက်ထွက်နှုန်းအောက် လျော့ကျပြီးထွက်ရှိရန် စီမံကွပ်ကဲခြင်း။စက်များကြံ့ခိုင်မှုစစ်ဆေးခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ရန် ညွှန်ကြားခြင်း။ စက်ပြုပြင်မှုမှတ်တမ်းများ ပြုစု ထား၇ှိခြင်း။စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ Mould ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို ထုတ်လုပ် မှု Plan မထိခိုက်စေဘဲ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကြီးကြပ် လမ်းညွန်ခြင်း။ Maintenance Schedule ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း။ထုတ်ကုန် အရေအတွက်များ မှန်ကန်မှု ၇ှိ မ၇ှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ တွက်ချက်ခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်း။ကုန်ကြမ်းလက်ကျန်အရေအတွက် စစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်ချက်ကို ဂိုဒေါင်မှုးနှင့် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီး အထက်သို့ တင်ပြခြင်း။စက်ရုံအတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန မန်နေဂျာများအား တွေ့ဆုံလမ်းညွှန်သင်ကြားပေးခြင်း။ဌာန အတွင်း ပုံမှန် အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ပြီးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား အထက်သို့တင်ပြခြင်း။ထုတ်လုပ်မှု လျာထားချက် များကို အရောင်းဌာနနှင့် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းရေးဆွဲခြင်း။Warehouse /Logistics / Production Depts/Compressors ဌာန များအတွင်း လုပ်ငန်းအဆင်ပြေချောမွေ့မှု ရှိစေရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။Sales ဌာန နှင့် ပူးပေါင်းပြီး Customer complaints များကို တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခြင်း။၀န်ထမ်းများ၏ အလုပ်တက်ရက် ပျက်ရက်၊ ခွင့်၊ ခွင့်မဲ့ များကို ထိန်းချုပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊ထုတ်လုပ်မှုဌာနများ မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးခြင်း။လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးစီမံချက်များ ကို Admin Mgr နှင့် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီး ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ ၀န်ထမ်းများအား အသိပညာပေးခြင်း။မီးဘေးအန္တရယ်နှင့် လျှပ်စစ်ပိုင်းအန္တရယ် ကင်းရှင်းရေးကို Admin Manager နှင့် လိုအပ်ပါက တိုင်ပင်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခြင်း။Management မှ ညွှန်ကြားသော အခြားလုပ်ငန်းများအား လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း။
ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ Engineering နှင့်ပတ်သက်သော ဘွဲ့ရဖြစ်ပါက ဦးစားပေးမည်။ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၇ နှစ် ရှိ ရမည်။ထုတ်လုပ်မှု Plan များ၊ လုပ်ငန်းခွင် ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရယ် ကင်းရှင်းရေး စီမံချက်များ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။Computer ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်လျှင် ပိုမိုသင့်တော်သည်။English Speaking (Good ) Level ရှိရမည်။Problem Solving Skills, Cooperation Skills, Management Skills & Analytical Skills များရှိရမည်။လုပ်ငန်းခွင် တွင်းပေါ်ပေါက်လာသော ၀န်ထမ်းရေးရာပြဿနာ များ ၊ ထုတ်လုပ်မှုပြဿနာများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ကောင်းမွန်စွာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။TeamWork Spirit ရှိရမည်။MD/ Operation Department သို့ တိုက်ရိုက် Report တင်ရမည်။ Preferred SkillsPRODUCTION PLANNINGPRODUCT QUALITY CHECKINGHRMRRODUCTIVITY & REJECT OUTPUT CONTROL LINGMACHINE MAINTENANCE PLANNING
Founded in 2001 June, Great Foundation hasalong successful business for over 15 years in PET packaging. Our PET products and service are of high quality and compatibility, and they therefore could be identified in various applications from medicine to beverage and from lubricant to edible oil. We have also established long term supply history with top beverage brands such as Alpine and Blue Mountain. Great Foundation is the leading manufacture in providing tailored PET bottles and services on Injection and Blowing machine’s utilities. We are the local-owned biggest PET packaging manufacturer in terms of company size and production volume. Great Foundation is actively recruiting fresh people with passion and talent for what they are doing.
No.113, Shwe Pyi Thar Industries Zone (4), Yangon, Myanmar.
01-618290 ,618291, 618307, 618315, 09-254142094